Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ ထုတ်ကုန်များ)
Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
tag ကို: အရည်ကျိုမီးဖိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်း , ခဲအရည်ကျိုဖုန်များစုဆောင်းခြင်းအခန်း , ကြေးနီအရည်ကျိုဖုန်စုဆောင်း
FMQD (PPC, PPW) အမျိုးအစားလေထုသေတ္တာအိတ်စစ်ထုတ်စက်ကိုစျေးကွက်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ယခုအခါထိရောက်သော Impulse မိုးရွာသွန်းမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လက္ခဏာသည် Pulse...
tag ကို: solenoid solenoid Pulse Valve , Pulse ဂျက်အမြှေး Valve , လူမီနီယမ်အလွိုင်းအဆုတ်အမြှေး Valve
Pulse solenoid အဆို့ရှင်, လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အလုပ်လုပ်နိယာမ: diaphragm သည် electromagnetic pulse အဆို့ရှင်အားရှေ့နှင့်နောက်ရှိလေယာဉ်ခန်းနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ ဖိအားပေးသောလေအားနောက်ဘက်အခန်းသို့အခိုးအငှေ့ညှိရာအပေါက်မှ ဖြတ်၍...
tag ကို: AC220V Embedded Control Valve , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးများအတွက်နယူအမြှေး Valve , အနိမ့်ဖိအား 24V အဆုတ် Solenoid Valve
အကျဉ်းချုပ် - Electromagnetic pulse အဆို့ရှင် - လျှပ်စစ်သံလိုက်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်၊ ရှေ့ပြေးအဆို့ရှင်နှင့် pulse အဆို့ရှင်ပေါင်းစပ်ထားသောမြှေးအဆို့ရှင်။ လျှပ်စစ်သံလိုက် pulse အဆို့ရှင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု:...
tag ကို: သုံးလက်မဖုန် Solenoid Valve ဖယ်ရှားခြင်း , ခြောက်ပိုင်းခွဲ Pulse Solenoid Valve , DCF-4 Dustusting Differential Valve
အလုပ်အခြေအနေ လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်အဆို့ရှင်ကိုအသုံးပြုသောအခါပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်ပုံမှန်နှင့်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းခုန်အဆို့ရှင်:...
tag ကို: Flat Bag သံမဏိအရိုးစု , Flat Bag သွပ်ရည်စိမ်အရိုးစု , Flat Bag ပက်ဖြန်းအရိုးစု
tag ကို: စာအိတ်အမျိုးအစား Filter အိတ်အရိုးစု , စာအိတ် Filter Bag အိတ် , စာအိတ်ကိတ်အိတ်ကိတ်
အဆိုပါ splicing အရိုးစုနေရာများအလုံအလောက်မရှိဘဲဖုန်မှုန့်ဘောင်ကိုတပ်ဆင်ရန်အများအားဖြင့်ဖုန်မှုန့် remover များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းမှာ multi head connection လိုအပ်သည်။ အရိုးစု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုခိုင်မြဲစွာဂဟေဆော်ထားသည်။...
tag ကို: အိတ်များလှုံဆော်ပေးသောအိတ်ဆောင်အိတ် , Cage အရိုးကိုထောက်ပံ့ Deduster , Deduster ပံ့ပိုးမှု Frame
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့်အိတ်၏အောက်ခြေတွင်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းအတွက် Ash သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း။ ၁၊ ဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းခြင်း - ဓါတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးသည်အိတ်မှဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်မြင့်မားသောဖိအားဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ပြင်ပလေစစ်စစ်အိတ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။...
tag ကို: Trapezoid Organosilicon Cage အရိုး , Trapezoid သွပ်သွင်းခြင်း Cage အရိုး , Trapezoidal Squirrel Cage အရိုး
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၏အရိုးစုကိုအသုံးပြုရာတွင်မှတ်သားသင့်သည်မှာ - 1, လက်စွပ်၏အတွင်းအချင်းပိုကြီးသည်, ဒါကြောင့်သူကလှောင်အိမ်၏ပါးလွှာပတ်ပတ်လည်သံမဏိကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ထုတ်မသွားနိုင်အောင်။ 2, ပြာ Hopper ၏ဒီဇိုင်းကိုလူပြာ Hopper...
နွေ ဦး ရာသီဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလှောင်အိမ်အရိုး
tag ကို: နွေ ဦး ရာသီသွပ်အအိတ် Frame , Star Angle သံမဏိအိတ်အရိုး , Trapezoid သံမဏိအိတ်အရိုး
tag ကို: Flat Bag Organosilicon အိတ်ကိတ် , Trapezoid အိတ်အမျိုးအစားဖုန်စုဆောင်း Frame , နွေ ဦး ရာသီသွပ်ရည်စိမ်
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံပုံစံသုံးမျိုးရှိပါသည်။ မျက်နှာပြင်သွပ်သွင်းခြင်း၊ silicone မျက်နှာပြင်ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့်အမှုန့်ဖြန်းခြင်း။ 1. ဖုန်မှုန့်အရိုးစုမျက်နှာပြင်၏ galvanizing ကုသမှု...
tag ကို: သံမဏိ galvanized အရိုးစု , Grey မီးဖိုရှိ Organosilicon အရိုးစု , ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှအရိုးစုများကိုဖျန်းပေးခဲ့သည်
တစ် ဦး organosilicon ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အရိုး၏ anticorrosion ဝိသေသလက္ခဏာများ Anticorrosion အရိုးစုသည်ဖုန်ထူသောအိတ်နှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသောဖုန်မှုန့်စုဆောင်းမှုဖြစ်သည်။...
tag ကို: မြို့ပတ်စစ်ထုတ်စက်အိတ်ကိတ် , ကာဗွန်သံမဏိအိတ်ထောက်ခံမှုကေ့ , ကာဗွန်သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်အိတ်များ
လူတိုင်းသည်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏အရိုးစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ခြင်းမရှိဟုထင်သည်။...
tag ကို: အိတ် Filter Bag , စက်မှုဖုန်ဖယ်ရှားရေးအိတ်အိတ် , ဝါယာကြိုး Braced Filter ကို 12
သင် Jian ကုမ္ပဏီမှ venturi ပြွန်မှုန့်ဖယ်ရှားပေးသည့်အရိုးစု၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ တင်သွင်းထားသောမူပိုင်ခွင့်နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းသည်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအတိုင်းအတာပြည့်စုံသည်။ ၂။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာ၊...
မြို့ပတ်ရထား organosilicon ဖုံးအုပ်ထားသောဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: Organosilicon Coating Filter Bag အိတ်စစ်ထုတ်စက် , စက်ရုံအဘို့အိတ်အိတ် Cage အရိုး , အရည်အသွေးမြင့်သောစစ်ထုတ်အိတ်စစ်ထုတ်စက်
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအရိုးစု - မြို့ပတ်ရထားအိတ်ဘောင် (ပြင်ပ filter အမျိုးအစား) ကို filter အိတ်၏နံရိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်။ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။...
အော်ဂဲနစ် silica ဖုန်မှုန့်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘောင်
tag ကို: ဖုန်အိတ်များပံ့ပိုးမှု filter ကိုအိတ် , စိတ်တိုင်းကျ Organosilicon အိတ်ကေ့ , Star Angle ဖုန်စစ်ထုတ်အိတ်မူဘောင်
နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် ၁။ ဖိအားပုံသဏ္preventာန်ပျက်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းပျက်စီးခြင်း၊ အိတ်တစ်လုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောခွန်အား၊ ခိုင်မာသော၊ ဒေါင်လိုက်နှင့်အရွယ်အစားတိကျမှုရှိရမည်။ ၂။...
tag ကို: လေထုစစ်ထုတ်စက် Cage နှင့် Venturi , ဖုန်ကောက်ခံသူများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိအိတ် , စက်မှုသွပ်ရည်စိမ်အိတ်
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အပြင်ဘက်တွင်မြင့်မားသောခွန်အား၊ အပူချိန်၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်သွန်းလုပ်သည်။...
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိဖုန်အိတ်အိတ် , ကာဗွန်သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်အရိုးအိတ် , ကာဗွန်သံမဏိလေစစ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ Venturi
tag ကို: Cage အရိုး Dedusting , သွပ်စိတ်ပျက်စရာအရိုးစု , Spliced ​​Dedusting အရိုးစု
၁။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၏အရိုးစုသည်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္tsာန်ကိုလက်ခံသည်။ အိတ်၏ longitudinal နှင့် reverse bracing ring ကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေထားပြီး၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောခွန်အားနှင့်မာကျောမှုရှိသည်။...
Trapezoid အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နွေ ဦး ရာသီဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလှောင်အိမ်အရိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလှောင်အိမ်သံဝါယာကြိုးလှောင်အိမ် galvanized အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြို့ပတ်ရထား organosilicon ဖုံးအုပ်ထားသောဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အော်ဂဲနစ် silica ဖုန်မှုန့်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ from China, Need to find cheap Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Flat Bag ဖုန် Bag ကေ့, We'll reply you in fastest.